barsha siwakoti – Fursad Nepal
Tag Archives: barsha siwakoti
बुद्धि संग रिसाईन बर्षा, के गर्दैछ भैरेले ?
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on बुद्धि संग रिसाईन बर्षा, के गर्दैछ भैरेले ?
नेपालको रमणीय स्थलहरुमा हरेक दिनजसो फिल्महरुको छायांकन भैरहेको हुन्छ । यस्तै हाल फिल्म ‘भैरे’को पनि धमाधम छायांकन हुदैछ । अप्पर मुस्ताङमा अवस्थित लोमाङथाङ भन्ने ठाउमा यो फिल्मको युनिट काम गरिरहेका छन् । यसैक्रममा फिल्मका मुख्य कलाकारहरुको केहि तस्बिरहरू केहिदिन अघि सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक ३ तस्बिरमा बुद्धि तामाङ र बर्षा सिवाकोटी छन् भने फरक फरक मुडमा प्रस्तुत भएका छन् …
चुनावबारे पुरै बेखबर : के भन्छन् यी ८ कलाकार
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on चुनावबारे पुरै बेखबर : के भन्छन् यी ८ कलाकार
धेरै कलाकारले अहिलेसम्म भोट हालेका छैनन् । धेरैको मतदाता नामावलीमा नाम पनि छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ । अनुपविक्रम शाही खै चुनाव भनेको त सुनेको हो । कस्तो चुनाव रु त्यो चाहिँ थाहा छैन । मैले आजसम्म भोट हालेको छैन । बेनिशा हमाल अभिनेत्री बेनिशा हमालले निर्णय गरिसकेकी छिन् यसपालि चुनावमा भोट नहाल्ने । उनको गृह जिल्ला चितवन …
कुर्दाकुर्दै बर्षा सिवाकोटी अब दया अभिनित ‘भैरे’ तिर
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on कुर्दाकुर्दै बर्षा सिवाकोटी अब दया अभिनित ‘भैरे’ तिर
म्युजिक भोडियोमा रुचाईएकी मोडल हुन बर्षा सिवाकोटी । केहि फिल्ममा पनि उनले अभिनय गरिसकेकी छिन । उनले हाल आफु अनुबन्धित भएको फिल्म ‘रानिमहल’ कुर्दा कुर्दै ३ महिना बितिसक्यो । तर अझै छायांकनको अत्तोपत्तो छैन । अहिले उनले अर्को चलचित्रमा खेल्ने पक्कापक्की भएको छ । दयाहाङको मुख्य भुमिका रहने चर्चा चलेको फिल्म ‘भैरे’ मा उनी अनुबन्धित भएकी हुन । उनले कुरिरहेको …
गायक दीपक पाठकको “आँखैमा हो राखौं कि”
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on गायक दीपक पाठकको “आँखैमा हो राखौं कि”
गायक दीपक पाठकले ‘आँखैमा हो राखौं कि…’ गीत श्रोता माझ ल्याएका छन् । पहिलो एल्वम ‘म आकाश भएको हुन्छु’ बाट दर्शक–स्रोताको मन जित्न सफल दीपक पाठकको दोस्रो एल्वम स्टेप वानमा समावेश आँखैमा हो राखौं कि लिएर आएका हुन् । स्टेप वानमा रहेका गीत मध्ये ‘माकुरीले जाल बुने जसरी…’को भिडियो केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो भने ‘आँखैमा हो राखौं कि…’को भिडियो …
वर्षालाई फेरि धक्का
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on वर्षालाई फेरि धक्का
‘नाई नभन्नू ल २’ बाट नेपाली रजतपटमा भित्रिएकी नायिका वर्षा सिवाकोटीले यसभन्दा अगाडि दर्जनौ म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी थिइन् । आफ्नो डेब्यू फिल्म हिट भएपछि वर्षाको भुइँमा खुट्टा थिएन । सायद उनलाई लागेको थियो अब म सुपरस्टार भएँ ।पहिलो फिल्म नै हिट भएपछि उनलाई आफ्नो फिल्ममा साइन गर्न निर्माताहरुको तछाडमछाड पनि खुबै थियो । तर, ‘नाई नभन्नू ल २’ पछि …
‘अहिलेको तीजैमा नाचौं छमछम’ भन्दै डवल बर्षा
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos, फुर्सद फिल्मी Comments Off on ‘अहिलेको तीजैमा नाचौं छमछम’ भन्दै डवल बर्षा
पछिल्लो समय चलचित्र बजारमा दुई बषा अर्थात वर्षा राउत र वर्षा शिवाकोटीको चर्चा छ । यी दुई कै अभिनय रहेको तिज गीत ‘अहिलेको तीजैमा नाचौ छमछम’ सार्वजनिक भएको छ । गायिका सिन्धु मल्लले नजिकिदै गरेको तिजलाई मध्य नजर गरेर झन्डै ५ बर्षपछी यो गीत ल्याएको हो । गीतको भिडियोमा दुई बर्षाले छमछम कम्बर मर्काएका छन् । भिडियो सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक सुव्रत …
फ्राइडे मुभी : दर्शकलाई सुशील र बर्षाको ‘कारखाना’
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on फ्राइडे मुभी : दर्शकलाई सुशील र बर्षाको ‘कारखाना’
सुशील श्रेष्ठ र बर्षा सिवाकोटी अभिनित चलचित्र ‘कारखाना’ आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । फ्राइडे रिलिजको परम्परा धान्दै प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले सरोगेसीको कथा बिषयको रुपमा उठाएको छ ।पटक पटकको रिलिज मिति सर्दै आएको यो चलचित्र ‘मायाले बोले’ बोलको गीतका कारणले पनि चर्चित छ । यो गीत दर्शकले निकै राचाएका छन् । सुदीप खड्का र अमर बज्राचार्यको संयुक्त निर्माण रहेको चलचित्रमा …
निकटता बर्षा र सुशिलको
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on निकटता बर्षा र सुशिलको
नायक सुशिल श्रेष्ठ र नायिका बर्षा सिवाकोटी एक अर्कासँग नजिक छन् । चलचित्र बजारमा यी दुई प्रेममा रहेको चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, आफूहरु साथीको सम्बन्धमा नै ठिक रहेको यी दुइ बताउँछन् ।यी दुइको दौडधुप अहिले बढेको छ । असार १६ गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘कारखाना’मा एकसाथ काम गरेपछि यी दुई नजिक भएका हुन् । चलचित्रमा आफूहरुको जोडी …
बर्षा र सुशिलको निकटता, निर्माता र निर्देशकबीच झगडा
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on बर्षा र सुशिलको निकटता, निर्माता र निर्देशकबीच झगडा
चलचित्र ‘कारखाना’ प्रदर्शनको तयारीमा छ । चलचित्रको प्रदर्शनसंगै नायक सुशिल श्रेष्ठ र नायिका बर्षा सिवाकोटीको सामिप्यता पनि फिल्मी बजारमा यतिबेला गसिपको विषय बनेको छ । बजारमा आएको हल्ला भने यि जोडी एक अर्कासँग नजिक छन् । तर, आफूहरु साथीको सम्बन्धमा नै ठिक रहेको यी दुइ बताउँछन् । असार १६ गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘कारखाना’मा एकसाथ काम गरेपछि यी दुई …
के छ बर्षा र सुशीलको कारखाना भित्र ?
Featured, Nepali Movie News, Trailers, फुर्सद फिल्मी Comments Off on के छ बर्षा र सुशीलको कारखाना भित्र ?
‘बिहे भनेको त आफ्नै गलफ्रेन्डसँग गर्नुपर्छ’ भन्ने पहिलो संवादसहित चलचित्र ‘कारखाना’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । असार १६ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै चलचित्रको ट्रेलर काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गरिएको हो ।अमरदिप सापकोटाको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा सुशिल श्रेष्ठ, बर्षा सिवाकोटी, जेविका कार्की, मौसमी मल्ल लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । कार्यक्रममा नायिका सिवाकोटीले चलचित्रको कथावस्तु आफ्नो …